Thwebula Microsoft Word 16.0.6131.1008 isizulu – Vessoft
Thwebula Microsoft Word
Microsoft Word – isofthiwe ukudala, buka bese uhlela amaphepha. Microsoft Word ikuvumela ukuba qualitatively akhiphe imibhalo okusalayo ezingenakuguquleka kunoma iyiphi idivayisi. Isofthiwe kwenza ukwengeza izithombe, amashadi, amatafula, yaphansi ingcaca izakhi SmartArt. In Microsoft Word izakhi control asezindaweni phansi kwesikrini ukuze ukusetshenziswa elula imisebenzi software ngesandla esisodwa. Futhi isofthiwe ikuvumela ukubuka okunamathiselwe e-mail futhi ukuthola i ukufinyelela imibhalo iZwi kusukela ezihlukahlukene ifu storages. Microsoft Word ine interface enembile futhi ajwayelekile navigation system lapho sikwazi umsebenzisi ngokushesha kahle software.
Dala, buka bese uhlela amaphepha
Engeza izithombe, amatafula, links kanye nezinye izingxenye
Vuselela okuqukethwe idokhumenti emva ukuhlela kuwo wonke amadivayisi
Amazwana on Microsoft Word:
Microsoft Word Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... OneNote 15.1.6319.4426
English, Español, 中文, Português... Guns 1.99